Rita, Writing for My Sake!: မိုင်သီ
Posted by Rita at 7/04/2009 09:25:00 PM
သူတပါး နိုင်ငံမှာ နေရတဲ့ အခါဒီလို သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုပိုပြီး သိလာတတ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတာ ခွဲခွာဖို့အတွက် ဆိုရင် ခွဲခွာခြင်းဆိုတာ ပြန်လည်ဆုံးစည်းဖို့အတွက် လမ်းစပါပဲ...
သူငယ်ချင်းကောင်း ရဖိုံခက်တယ်.. ကံကောင်းတာပေါ့..။
သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်ဟာ တန်ဖိုးက အင်မတန်ကြီးမြင့်ပါတယ် တိုင်းတာလို့လည်ူ မရစကောင်းပါဘူး။
ဖတ်ရင်း ကိုယ်က မျက်ရည်ကျရတယ် ရီတာ....
ကျွန်တော့်မှာလည်း အဲလို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်
သူက ကိုယ်ဘာလိုလည်း သူသိတယ်..
ခက်တာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး လွမ်းလိုက်တာ
ကျွန်တော့်ရဲ့အဲလို အားပေးဖော် ဒီကိုလာဖို့ အစအဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းလည်း ခုဟိုပြန်ရောက်နေတယ်။ သူ့ကိုတောင် သတိရမိပါ့
မိုင်သီက ချစ်စရာလေးနော် ရီတာ။
With delight for this heartwarming friendship and Mai The, let me share the following poem by Kelly.
တဦးကစေတနာ တဦးကမေတ္တာဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ရဲ့...
စာတွေကများတော့မလည်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူကဘာလို့ပြန်တာတဲ့လဲ။ စင်ကာပူက England ထက်တောင်ပျော်စရာပေါဦးမယ်ထင်နေတာ
သူက ကျောင်းပြီးလို့ ပြန်တာ။ စင်ကာပူမှာ စက်ရုပ်မလုပ်ချင်တော့လို့ အလုပ် မရှာတော့ဘဲ ပြန်တာ။
မြရဲ့လ ကို ကိုရင်နော်တို့ဆီမှာ နားထောင်နိုင်ပြီဆိုတာ သတင်းလာပေးတာ
စင်ကာပူမှာ စက်ရုပ်မလုပ်ချင်တော့လို့ အလုပ် မရှာတော့ဘဲ ပြန်တာ...
သူငယ်ချင်းအကြောင်းကို ချစ်စရာကောင်းအောင် သေသေချာချာ စုံစုံစေ့စေ့ရေးတတ်တဲ့ ရီတာ...
မိုင်သီ အကြောင်းဖတ်နေရင်း ဝမ်းနဲသလိုလိုရယ်...
ရီတာရေးတာ တော်တော် ဖက်လို့ကောင်းတယ်ဗျ..ကျတော်ဆို ဒီလိုရေတက်မှာ မဟုတ်ဘူးရယ်...
သူက ပြန်မယ်ဆိုတော့လဲ ပြန်ပေါ့ကွယ်....စင်ကာပူ နဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုတာ ဘယ်အချိန် မဆို သွားလို့ လာလို့ ရနေတာပဲဟုတ်....
ကျတော့မှာလဲ မိုင်သီလို သယ်ရင်းကောင်းရှိပါတယ်။ ကျတော်နှစ်ယောက်က တစ်ခါတလေ အရမ်းချစ်ကြပီး တစ်ခါတလေ မခေါ်မပြောကြဖူးလေ။ ကျတော့ရဲ့ စကာင်္ပူရောက်စနေ့ရက်တွေ ဟာ သူရဲ့ ညွှန်ပြမှု အောက်မှာ ရှိခဲတာပေါ့..သူ့ကို တစ်ခါတလေ အရမ်းခင်ပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သောက်မြင်ကတ်တယ်...ဒီရက်ပိုင်းမှာ သူနဲ့ ကျတော် ရန်ဖြစ်ထားတယ်...။
ရတောင့်ရခဲတဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ ဆိုရမလား ..
အဲ့လို သူငယ်ချင်းမျိုးကို အလေးအနက်ထားတတ်တာလည်း
စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားကို ကိုယ်စားပြုတယ် ပြောရမလား ..
သူငယ်ချင်း မိုင်သီနဲ့ အတူ
စစ်မှန်တည်တံ့တဲ့ တွဲလက်တစ်စုံ မြဲမြံခိုင်ခံ့နိုင်ပါစေ ..
Nyan Lin said...
ဘာလိုလိုနဲ့ မသိပြန်သွားတာတောင်ကြာပြီနော်။ ကျွန်တော့် interview ကိုသူလိုက်ခဲ့ပေးတာလည်း မနေ့ကလိုပဲ။း)